Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar FARITRA SAVA : NAIDITRA AM-PONJA IREO ROALAHY TRATRA NAMONO GIDRO MIISA 45 – Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
FARITRA SAVA : NAIDITRA AM-PONJA IREO ROALAHY TRATRA NAMONO GIDRO MIISA 45
Tsy mihemotra amin’ny fampiharana ny « tolérance zéro » ny MEDD amin’ireo rehetra tratra manao fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanahary.
Izay no antony manokana nametrahana ny Fitaleavana misahana ny ady amin’ny kolikoly eto anivon’ny Ministera #DULC izay tarihin’Andriamatoa Commissaire ANDRIANIRINA H. Fanomezantsoa.
Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Polisim-Pirenena dia tra-tehaka ny olona roa namono gidro miisa 45 tao Manitialaka – Faritra SAVA tamin’ity herinandro ity. Naiditra am-ponja vonjimaika avokoa izy mirahalahy ireto taorian’ny fanadihadiana hafahana mikaroka ny mpiray tsikombakomba aminy.
Ankasitrahana ary entanina hatrany ny fiaraha-miasa amintsika rehetra ho sarotiny sy ho saropiaro amin’ny fiarovana ny harena voajanaharintsika.